Dr. Tint Swe's Writings: Diabetes ဆီးချို
အသက် ၅၉။ အမျိုးသမီး။ ရောဂါလက္ခဏာ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း၊ ခြေလက်အကြောကပ်ခြင်း၊ မျက်ရည်ပူကျခြင်း၊ မျက်စိအနီးမှုန်၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဆရာရေ အခုလောလောဆယ် မေမေက ဆီးချိုစစ်တာ အစာမစားမီ နံနက်ပိုင်းစစ်ဆေးရာမှာ ၁၅၆ ရှိပြီး၊ ညနေစစ်ရာမှာ ၂၃၆ ရှိပြီး၊ ဆေးသောက်နေရပါတယ်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
ဆီးချိုကို Diabetes mellitus လို့ခေါ်တယ်။ တချို့တွေက ဆီးချို ခေါ်တယ်၊ သွေးချိုခေါ်တယ်။ ဆီးစစ်တာကိုဆီးချို၊ သွေးစစ်တော့သွေးချို၊ အတူတူကို နှစ်မျိုး ထင်ကြနေကြတယ်။ တကယ်က ၃ မျိုးရှိတာပါ။
၂။ Type2Diabetes (အင်စူလင်) ဟော်မုန်းကို ခံနိုင်ရည်ဖြစ်နေတာ။ လူတွေ အများဆုံးဖြစ်တယ်။
(၁) နဲ့ (၂) က နာတာရှည်ဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝပျောက်တယ်ဆိုတာ မရှိပါ။ (၃) ကတော့ မွေးပြီး ကောင်းသွားတာများတယ်။ နောက်မှာ အမျိုးအစား (၂) ဖြစ်သွားတတ်တာလဲရှိတယ်။ မွေးရာပါဆီးချို၊ Cystic fibrosis ရောဂါနဲ့တွဲတာ၊ Steroid ဆေးကြောင့်ဖြစ်တာ၊ စသဖြင့် ရှိသေးတယ်။
ဆီးချိုကို မကုဘဲထားရင် သကြားဓါတ် နည်းလွန်းသွားတာ နဲ့ သတိလစ်တာက ရုတ်တရက်ဖြစ်တာတွေပါ။ ရေရှည် ဖြစ်နိုင်တာတွေက နှလုံး-သွေးကြောရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်တာ၊ မျက်စိထိခိုက်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးချိုကိုကုတာမှာ သွေးတိုး (သွေးဖိအားများ) တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ချတာ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာတွေနဲ့ တွဲလုပ်ရမယ်။
ကုသရတာ ရေရှည်ပါ။ သွေးထဲက အချိုဓါတ်ကို ပုံမှန်မှာ ရှိနေအောင် လုပ်ပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်ထိန်းတာနဲ့ ဆေးပေးတာက မလုပ်မနေလုပ်ရပါမယ်။ ဆေးမှာ အမျိုးအစား (၁) ကို (အင်စူလင်) ထိုးဆေး၊ (၂) ကို စားဆေးနဲ့ လိုသေးရင်တော့ ထိုးဆေးပေးရတယ်။ တချိန်တည်းမှာ လူနာကို ဆီးချိုအကြောင်းသိအောင် ပညာပေးရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဘို့၊ (ကိုလက်စထော) ချဘို့တွေပါ လုပ်ရမယ်။ ဒီလိုလုပ်တာ နေထိုင်မှုဘဝကိုပါ ပြောင်းစေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အကြမ်းအားဖြင့် အဓိက အစာအုပ်စု (၃) မျိုး -
- ပဌမမျိုးဆက် Orinase (tolbutamide) = 500 - 3000 mg; Tolinase (tolazamide) = 100 - 1000 mg; Diabinese (chlorpropamide) = 100 - 500 mg
- ဒုတိယမျိုးဆက် Glucotrol (glipizide) 2.5 - 40 mg; Glucotrol XL (ext. rel. glipizide) 2.5 - 20 mg; Micronase, Diabeta (glyburide) 1.25 - 2.0 mg; Glynase (micronized gly.)3- 12 mg
• Insulin, Sulfonylurea injection ဆီးချိုအတွက်ထိုးဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ဆေးထိုးသည့် နေရာ နီ-ရောင်-ယား၊ ကိုယ်ရောင်၊ အလာဂျီရ၊
Diabetic neuropathy ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/diabetic-neuropathy.html ကိုလဲဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုရှိလျှက် အသက် ၁၂ဝ ရှည်ပါစေ။